Ungazithumela njani iingoma okanye ugcine ufumene kwi-WhatsApp | IPhone iindaba
Ungazithumela njani iingoma okanye ugcine ezamkelweyo kuWhatsApp
Ukusukela izolo singathumela kwaye sifumane amaxwebhu ngoWhatsApp ngaphandle kwesidingo sokuba babeyiPDF okanye kufuneka bawaguqulele kolo fomathi. Ndiyabulela kule nto intsha, singathumela iLizwi, i-Excel, iPowerPoint okanye amaxwebhu acacileyo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa singathumela neengoma, into ethi ubuncinci mna, obesoloko ndisebenzisa isicelo soMculo woMthonyama, ndingazange ndiyenze. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani thumela kwaye ukhuphele iingoma ezifunyenwe kuWhatsApp? Ewe, qhubeka ufunda.
Okokuqala ndingathanda ukuthi ndenze uphando kwaye ndafumanisa ukuba iingoma zinokuthunyelwa nge-WhatsApp ixesha elide, kodwa zisebenzisa ezinye izicelo kunye neendlela ezibiza kakhulu. Apha siza kukufundisa indlela yokubathumela usebenzisa izicelo zomntu wesithathu, kodwa ngoku yonke into ilula kakhulu. Siza kukubonisa indlela zigcine kwi-iPhone yakho ukuze ukwazi ukuzala kwakhona nokuba ucima incoko apho ubufumene khona. Unalo lonke ulwazi olungezantsi.
1 Ungazithumela njani iingoma ngoWhatsApp
1.1 Ngokuhamba komsebenzi (kuhlawulwe)
1.2 Ngamaxwebhu 5 (simahla)
1.3 Ukusuka kolunye usetyenziso
2 Ungazikhuphela njani iingoma ezifunyenwe nguWhatsApp
Ungazithumela njani iingoma ngoWhatsApp
Ngokuhamba komsebenzi (kuhlawulwe)
thumela iingoma kwi .mp3 okanye m4a (ezinye iifomati endingekazami) zilula kakhulu. Into yokuqala esiyifunayo kukuba neengoma kwisiza esivumela ukuba sabelane ngolu hlobo lomxholo, njengesicelo sasimahla seVLC. Kodwa kukho isicelo esivumela ukuba senze yonke into kwaye ndiya kuhlala ndicebisa ukuthenga kwakho. Oku kukuhamba komsebenzi, apho sinokufumana kwakhona iingoma esinazo kwisicelo soMculo wasekhaya. Inkqubo yokuthumela iingoma ngoWhatsApp kusetyenziswa uMsebenzi ngokulandelayo:
Ngokufanelekileyo, ukuba asinayo i-Workflow efakiweyo, siya kwiVenkile ye App kwaye siyifakele. Ungayikhuphela kwi LONTO.
Ngoku uzakufuna ukuhamba komsebenzi ukuze ukhuphe iingoma kwisicelo somculo kwaye uzithumele. Ndenze enye onayo ngoku LONTO. Kuya kufuneka uyivule kwi-Workflow.
Ngesicelo esifakelweyo kunye nokuhamba komsebenzi okukhutshelweyo, sivula ukuHamba koMsebenzi kwaye siqalise ukuThunyelwa koMculo kokuhamba komsebenzi.
Ilula kakhulu ukuyisebenzisa: kufuneka sikhangele ingoma okanye iingoma esifuna ukuzithumela kwaye sizamkele.
Isinyathelo sokugqibela sokuhamba komsebenzi kunye nale ndlela iyabelana, eya kusivumela ukuba sithumele ingoma ngo-WhatsApp kunye nezinye iindlela.
Ngamaxwebhu 5 (simahla)
Ukhetho olulula njengangaphambili kodwa okungangcono ekubeni simahla kukuthumela iingoma usebenzisa isicelo samaXwebhu 5. Le ndlela ilula kakhulu kwaye kuya kufuneka senze oku kulandelayo:
Sikhuphela amaXwebhu ama-5 ukuba asifakwanga (Ukukhuphela).
Ngokusengqiqweni, ngoku sivula amaXwebhu 5.
Sivula i- «iPod Music Library».
Ngoku sibamba «Hlela».
Sikhetha iingoma esifuna ukuzithumela.
Siphatha i «Vula kwi».
Okokugqibela, sikhetha u- "WhatsApp" kwaye emva koko sinxibelelana nathi sifuna ukuthumela ingoma kuye.
Ukusuka kolunye usetyenziso
Ukuba sinengoma kwiVLC okanye esinye isicelo semultimedia, sinokukunika ngokuthe ngqo ukwabelana kwaye ukhethe i-WhatsApp. Kodwa kubonakala kunomdla ngakumbi kum ukukwazi ukuthumela ezo sinazo kwi-iPhone yethu. Ukuba usetyenziso lwe-multimedia apho sinengoma inesenzo sokwabelana esikhoyo (
) kodwa ayisivumeli ukuba siyithumele nge-WhatsApp, esinokuyisebenzisa LE YOMSEBENZI. Yeyona ilula kuzo zonke, kuba ifana noMboniso weMac, umbukeli wazo zonke iintlobo zamaxwebhu, kodwa kuyo sinokhetho lokwabelana olunamandla ngakumbi oluya kusivumela ukuba sithumele iingoma ngo-WhatsApp.
Ungazikhuphela njani iingoma ezifunyenwe nguWhatsApp
Icala elisezantsi lokujonga iingoma kuWhatsApp kukuba azinakukhutshelwa. Hayi? Hayi kancinci. Kukho iqhinga eliza kusinceda gcina iaudiyo yeWhatsApp. Le ndlela ilandelayo ayisiyeyona inomtsalane kwaye ndicinga ukuba kwixa elizayo akuyi kuba yimfuneko ukuthatha indlela engako, kodwa iyasebenza. Siza kuyenza ngokulandela la manyathelo:
Sidlala kwaye sibambelele kwingoma efunyenwe nguWhatsApp. Siza kubona ukuba ukhetho «Thumela kwakhona» luyavela.
Sicofa ku «Thumela kwakhona».
Ngoku sichukumisa i icon yokwabelana (
Ukusuka kukhetho oluvelayo, sikhetha «Yongeza kumanqaku».
Siyayamkela inqaku, akukho mfuneko yokuyibiza ngegama.
Ngoku sivula usetyenziso lweNqaku kunye nokufikelela kwinqaku elenziweyo.
Sidlala sabambelela kwingoma.
Ukusuka kukhetho oluvelayo, sikhetha «Yabelana».
Ngoku kufuneka sithethe ku «Jonga okukhawulezayo».
Siphatha kwakhona kwi icon yesabelo (
Kwaye okokugqibela, sigcina ingoma kwisicelo esihambelanayo. Ndingayigcina kwiVLC.
Njengoko besixelela kumagqabantshintshi, kodwa ndikhethe ukongeza ukhetho lwasekhaya kunye nolusimahla apha, ukuba une-Workflow sinokuqhuba kwakhona ukuQala kokuSebenza (Jonga ngokuKhawulezayo) ukuyigcina naphina. Singaqala kwakhona okunye ukuhamba komsebenzi, oku sele kunencasa yomthengi.
Njengoko ubona, ayisiyondlela enamanyathelo ambalwa, kodwa iyasebenza kwaye isombulula amathandabuzo ziphi iividiyo zikaWhatsApp ezigcinwe kwi-iPhone. Into embi kukuba ingoma ithunyelwe kwaye gcina ngegama elide kakhulu, Kodwa izicelo ezinje ngeVLC zikuvumela ukuba unike igama kwakhona ifayile. Ucinga ntoni ngezi ndlela zokuthumela kunye nokugcina iingoma ezivela kuWhatsApp?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ungazithumela njani iingoma okanye ugcine ezamkelweyo kuWhatsApp
Inomdla ... Ngaba ikhona enye indlela kodwa simahla?
Molo, Ongaziwayo. Uthetha ukuba uyabathumela? Njengoko ndibonisa, into ebalulekileyo kukuba nabo kwisicelo esandisiweyo. Umzekelo, ungathumela ingoma kwiVLC kwiqhosha lesabelo.
Ukuba ufuna ukuthumela ezo zisuka kwi-reel yakho, ungazama iZip (inenguqulo yasimahla) enokufikelela kwilayibrari yomculo. Ndiza kuyiphanda ndongeze ulwazi.
Hlela: hayi, iZip ayisebenzi ukuba ayihambelani nohlobo lwePro.Ndiza kubona ukuba ndifumana nasiphi na isicelo esinezinye iingoma ezikwithala leencwadi.
Hlela 2: Amaxwebhu 5 ayayivumela. Ndiyongeza eposini.
UYesu jaime gamez sitsho
Kubekho iapp kangangexesha elithile elisebenza njengesikhangeli esinememori player ukugcina iingoma ezikhutshelweyo.Ndisoloko ndiyisebenzisa ukusukela esiphelweni se-iPhone 5s, ibizwa ngokuba yi-idownloader, ilungile kakhulu
Phendula kuYesu jaime gamez
Into ethile sitsho
Unokuphinda ufumane i-dropbox ngokuhamba komsebenzi endaweni yokunika amanqaku ukuba ubaleke kwaye ukuba unayo iresiphi ufumana ukhetho lokuyikhuphela kwaye uyigcine naphina apho ufuna khona
Phendula kwinto ethile
into, unayo iresiphi yokukhuphela kunye nokugcina naphina apho ufuna khona?
Molo marcos. Ukuba unesicelo sokuhamba komsebenzi, ndongeze ikhonkco kuPreview. Lulwandiso olusungulwe kwiqhosha lesabelo. Ukuba uyinika ukuba wabelane ngayo kuWhatsApp, khetha u- "Run Workflow" kwaye ukhethe uPhononongo kuqala, uya kuba nakho ukujonga ifayile, kodwa into ekuthandayo kukuba xa ucofa iqhosha lesabelo kwakhona, uya kuba nakho ukwenza nantoni na oyifunayo ngayo, njengokuyigcina kwiVLC, kwiDropbox ...
Ḿảṝiō Rōċą sitsho
Ndinayo, kodwa ndingayidlulisela njani kuwe?
Phendula u Ḿảṝiō Rōċą
UPablo weMathematics sitsho
Ndifuna ukukuxelela ukuba ndiyayithanda iposti yakho. Ichanekileyo, inyanisekileyo kwaye iluncedo. Ukuhamba komsebenzi yayilusetyenziso oluye lwandenza ndaphucula ndaya kwi-iOS 8 kunye ne-iPhone 4s yam yangoku (esasasokola ne-iOS 9.3). Wayengazange afumane ukujonga kwangaphambili kuyo njengale milambo mibini. Konke okugqibelele.
Phendula kuPablo Mathematics
Ukuba ukhetho aluveli kwi-iphone yam yokongeza amanqaku, ndenza njani?
Molo, xa ndingena kwilayibrari yomculo we-iPhone yam ndisebenzisa amaXwebhu 5, andifumani khetho lokuhlela, ngenxa yoko. (Ndine-5 ye-iphone)
Enkosi kakhulu, ndiyisebenzise nje kwaye yandinceda kakhulu
I-Apple ineebhiliyoni zezizathu zokuphumelela ngokwenyani
Uthando olubaliweyo, ibhokisi yeAlbhamu kunye nokunye, simahla kangangexesha elithile